5 Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 31/10/2020)
Waqtiga ayaa ugu dambeyntii yimaado – haddii aad hadda jaamacad ka qalin jabiyay, waxaa cinwaan maqnaan aad fasaxa sannadlaha ah, ama go'aansaday in jaceylka ee safarka, dhulkiinnu midho ma lagu waayi karaa, aad dooratay in ay u safraan Europe tareen. Waa fikrad ka taataabtay, Dilal kala ah u safray by kun oo idil sano ah. Waxa kale oo ay noqon kartaa si buuxda u badiyey. Europe ayaa lagu yaqaanaa in ay xiriir fiican tareenka. From tigidhada deegaanka oo raqiis in pass tareenka qaaradda-oolna ah EU, Way fududahay in la bood on overnighter iyo timaadid aad u socoto subaxdii dambe, diyaar u tacaburka cusub.
Laakiin meesha aad mari lahaydeen? Haddii ay tahay markii ugu horeysey ama tobnaad, mugga sheer ah ee tareenada laga heli karaa waxay keeni kartaa in stress, jahwareer, iyo guud ahaan cabsida laga qabo in la waayo. welwelin – maxaa yeelay waxaan halkan ku soo uruurinay baaldi liiska ah 5 caasimadaha ugu fiican Yurub u safri tareen. Fadhiiso, suunka xidhaan, iyo mooyee qol baguettes ugu fiican France ee, maxaa yeelay, waxaan u socoto on masaafo.
1. Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka: Paris, France
Sida yaboohay, waxaan u bilaabaynaa safar this Cade, la stop ah in mid ka mid ah magaalooyinka ugu adduunka ee caanka ah oo caanka ka taataabtay. Paris ayaa qaar ka mid ah isku xirnaanta tareenka ugu fiican, tareenada ordaya oo dhan bartamaha magaalada, si aad u tahay marna ka fog saldhiga a. Paris waxaa ka buuxa wax in la sameeyo, sidaas darteed waxaad u baahan tihiin inaan halkaan sii joogo ugu yaraan saddex maalmood ah si aad u hesho soo bidhaamaysa nolosha magaalada.
Jooji by Louvre waayo, peek ah ee Lisa Mona ama jimicsi glutes kuwa by kedis ah De Arc ku Triomphe. Ku raaxayso safar casho on Rhine ah, bixiso booqasho in ay qaar ka mid ah yaalaaan Faransiiska, oo soo qaado Iftiinka Eiffel Tower markay timaado nolosha fiidkii.
Dabcan, Paris waa ka badan bartamaha magaalada ay. Magaalooyinka ayaa buux hoy u tahay in ka badan laba milyan oo qof, taas oo macnaheedu yahay in aad ka isticmaali karto todobaad halkan oo aan si dhab ah xoqidda dusha sare ee waxa uu leeyahay in ay bixiyaan. Cararaan safar maalin ka guutooyinkiisii ​​ee Alexandre Pont ah III iyo madaxa in Versailles, halkaas oo Royal Palace weli wayn taliya inkastoo ay firaaqo tan iyo 1700 ee. tigidhada iyo maalinta ay yihiin oo kaliya € 20 oo ka mid ah entry in Palace ee, Jardiinooyinka, iyo wax ka badan. xitaa wanaagsan, tareenada ay maamulaan bartamaha magaalada si toos ah u Palace ee, taas oo ka dhigaysa waxaa helitaanka neecaw. interconnectedness Tani waxay si rasmi ah ka dhigaysa mid ka mid ah Paris ee taajajkii ugu wanaagsan Yurub safarka tareenka.
Mid ka mid ah aan shakhsi magaalooyinka ugu jeceshahay oo kaliya laba saacadood ka Paris been caasimadda ah ee United Kingdom: London. dheri barafku ka mid ah dhaqamada Tani waxay hoy u tahay shir sanadeedkii sagaal milyan oo qof oo ka dhan socdaa nolosha. From posh Chelsea inay kala nastay barbaro Soho, waxaad ka heli doontaa waxqabadyo qof walba xafladdaada. mid ka mid ah Qabasho musicals ugu dambeeyay ka hor in ka badan Shakespeare ee Globe oo ku dhameysan aad habeenkii at Shard ah, munaaraddii ugu dheer ee London.
Waxaad ma doonayo inuu u degdegay magaaladan marayo, si loo qorsheeyo waqtiga aad sida. Haddii aad cinwaan u istuudiyaha Harry Potter (saac ah bartamaha magaalada), ama si fudud u qaadan ee dalka durkiya waaweyn sida Tower of London, St. Paul ee Cathedral, Westminster Abbey, Big Ben, ama indhaha ka London, daqiiqad kasta qaatay London waa fursad si ay u bartaan badan oo ku saabsan dalka kuwaas oo Empire mar fidisay dunida.
The tareen-xawaaraha sare ee Eurostar aad qaadataa Paris xarunta London ee in yar ka badan laba saacadood, taas oo macnaheedu yahay, waxaad ku Bixisaan doonaa yar safarka waqti iyo adventuring waqti dheeraad ah. Sayidka, waxaan ka fiirsan London kale oo ka mid ah caasimadaha ugu wanaagsan Yurub in ay si safarka tareenka.
3. Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka: Amsterdam, Netherlands
Caan ku tahay kanaalada iyo dadka baaskiilka ku tiirsan, Amsterdam u iftiimaa sida caasimadda Netherland ee. Iyada oo design gaar ah, Amsterdam waa magaalo wada jiidasho iyo xulkooda ka mid ah caasimadaha Yurub. Tareenadu ka Paris socon saddex saacadood oo aad ku shubi at Amsterdam Centraal, oo ku yaalla wadnaha ee magaalada.
Head in Museumplein ah in la qaato ee museum Van Gogh hor jeeda Golaha is biirsaday Bols & Genever Experience, taas oo ka mid ah doorashadaada is biirsaday oo ay qolka Dhadhaminta.
Ha iloobin in aad safar kanaalada ah, labada. Haddii aad qaadato safar u gaar ah ama hop gal mid ka mid ah doonyaha dadweynaha ee magaalada, waxaad heli doontaa aragti cusub Biyaha. In kasta oo ay ka dhaxleen waayo doonyaha iyo baaskiilada, Amsterdam waa si fudud oo dhan ka Europe helo biraha-xawaaraha sare, samaynta this tartamaya top kale magaalada ugu fiican Yurub ee safarka tareenka.
axdiga A si xariif Jarmal, magaalada Berlin waa waxbarasho u fiicnaa midnimo. Kala qaybsamo laba by Wall Berlin ah, caasimada this dib kaliya ay midnimada 1989 ka dib burburkii taliskii shuuciga ee bari. Tan iyo markaas, waxa qarxay leh koritaanka magaalooyinka iyo hadda waxay hoy u tahay in ka badan laba milyan oo qof. Waa ay ka buuxaan biir farsamada baararka, matxafyada, iyo hadhaagii graffitied ee Wall ah.
Sida xarunta dhaqanka ee dalka, Berlin waa waajib-booqasho. Haddii aad raadineyso weeyna madadaalada safeeyey qaab opera ama doonaya inay ku dhuftay qaar ka mid ah miyuuna u hippest in Europe, Berlin waa in aan la seegay.
In kastoo ay aad u qaadan doonaa ugu yaraan lix saacadood in aan halkan ka heli Amsterdam, waxaa jira tareen badan maalin kasta, taas oo macnaheedu yahay inaad dhigay kartaa jadwalka u gaar ah si ay u yimaadaan.
5. Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka: Prague, Czech Republic
Ka duwan caasimadaha reer galbeedka Yurub, Prague waa caasimadda ah ee Czech Republic ee Yurubta Bari iyo mid ka mid ah magaalooyinka caanka dhexe ee Yurub ugu. Home mid ka mid ah maktabadaha caanka ah ee dunida ugu, Klementium ah, Prague oo soo bandhigtay in ay dhaqan agagaarka rukun kasta. Booqo Clock ah sumalka uguma, saacad ugu da'da hawlgalka ee dunida. Qaado cabbayso agagaarka Town Square Hore, halkaas oo jidadka ka samysan iyo surimmada pedestrianized macnaheedu aad ka isticmaali karto saacadood ambaday aan walwal.
Top off waqtiga aad la cabniin oo ah mid ka mid ah baararka badan oo qarsoon ee magaalada ka hor soo baxay si a iid music.
Prague faanaa links tareen fiican magaalooyin kale, oo ay ku jiraan waqti sodcaalkoodii ka bilaabeen Berlin afar saac iyo bar ah. halkan Jooji si uu u nuugo taariikhda magaalada ka hor inta sii safarkaaga oo dhan inta kale ee Europe.
Yurub waa dhul ballaadhan oo kala jaad ah oo Midowgiisu ka dhigan yahay inay ka sahlan tahay sidii hore in tareen lagu safro. Ka faa'iidayso dalalka borderless in safarka kuwaas caasimadaha taariikhi ah oo ku saabsan waqtiga aad. Skip madax ka ah garoonka diyaaradaha iyo dadkii badnaa iyo cunto diyaarad duldhigay iyo isticmaasho tareen si ay safarka. Haddii aad bood on board wadada goboleed ama ku qaataan yar oo dheeraad ah xadiidka xawaaraha sare ee ay, aad ku raaxaysan doonaa safarka tareenka, daawashada, iyo waxbadan oo dheeri ah.
Waxaan ka helay aad u daboolay talooyin safarka. Hadda waxa la joogaa wakhtigii inay jartaan qaar ka mid ah tigidhada tareenka! Save A tareenka waa goob lagu iibsado tikidhada tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Yurub Capitals inay ku socdaalaan tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / in ay / de ama / es iyo luuqado badan.
magaalada caasimadaha europeantravel europetrains eurotrip London tareen safarka travelfrance travelgermany travelnetherlands